Ny ezaka ataon’ny mpikatroka hametrahana ny fiteniny Dagbani ho ao anaty sarintany nomerika · Global Voices teny Malagasy
Mbola vitsy ny votoaty anjotra amin'ny fiteny Dagbani, hoy i Mohammed Salat Abdulai
Voadika ny 12 Jona 2021 4:23 GMT
““Independence Arch – Accra, Ghana” avy amin'i George Appiah, nampiasana lisansa CC BY 2.0
Fanamarihan'ny tonian-dahatsoratra: Manomboka amin'ny 27 Aprily-3 May 2021, Mohammed Sadat Abdulai no handray ny kaonty Twitter @DigiAfricanLang izay manadihady ny fomba fampiasana ny teknolojia hamelomana aina ireo fiteny Afrikana. Vakio bebe kokoa eto ny momba ny fanentanana.
Ny Côte-de-l’Or, antsoina hoe Ghana ankehitriny no fonenan'ny karazana fiteny samihafa, izany hoe maherin'ny 46, raha ny marina. Anisan'ireny ny Dagbani, antsoina hoe Dagbanli, izay iray amin'ny fiteny Gur ampiasaina any amin'ny faritra sasany any Afrika Andrefana. Ny fiteny Gur dia anatin'ny sokajy misy ny fiteny Nizeria-Kongo any Afrika atsimon'i Sahara.
Ghaniana avy any Dagbonba monina any Alemaina i Mohammed Salat Abdulai. Liana amin'ny mba hahitana ny fitenindrazany Dagbani amin'ny aterineto izy.
Mohammed Salat Abdulai (MSA) : Teraka tany Tamale, Ghana aho, saingy monina any Berlin, Alemaina. Tena liana tanteraka amin'ny soatoavina sy ny lanjan'ny fahalalàna misokatra hanovana an'izao tontolo izao aho. Ao ambadik'io nofinofy io dia heveriko fa ilaina mba hanatanterahana io zava-dehibe io ny fanehoana tsara ny fiteny, indrindra ireo izay tsy dia aseho amin'ny sehatra ankihihihy (dizitaly).
MSA : Ampiasaina tsara ny Dagbani amin'ny maha-fiteny azy, raha mbola maro ny mampiasa izany miaraka amin'ny ray aman-dreny miteny io fiteny io any an-tokantrano. Na izany aza, an-tserasera, tsy dia mahavelom-panantenana loatra ny zava-misy. Na dia ampianarina any an-tsekoly aza ny Dagbani, manomboka amin'ny ambaratonga voalohany ka hatramin'ny ambaratonga ambony dia vitsy dia vitsy ny loharano an-tserasera amin'ny teny Dagbani.
Nizeria 12 Oktobra 2021